ဒီဇိုင်နာ သင်တန်း တက်ခါစ ညီမလေးတွေ သင်ယူခါစမှာ မှားတတ်တဲ့ အမှားလေးတွေ - Myanmar Textile & Garment Directory
ဒီဇိုင်နာ သင်တန်း တက်ခါစ ညီမလေးတွေ သင်ယူခါစမှာ မှားတတ်တဲ့ အမှားလေးတွေ
ဒီနေ့မှာတော့ ဒီဇိုင်နာသင်တန်းတက်ခါစ ညီမလေးတွေသင်ယူခါစမှာ မှားတတ်တာလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ရှင်။
1. ဒီဇိုင်းပညာကိုစတင်သင်ယူမယ့်သူတွေတော်တော်များများက ဈေးကြီးတဲ့စက်ကိုဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းပဲ ( ဈေးကြီးရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ယူဆကြတယ် , Function များလေပိုကောင်းလေထင်ကြတယ် ) တကယ်တော့ သင်ယူစမှာ သင့်တော်တဲ့စက်ချုပ်စက်တလုံးနဲ့ ဓားစက်တလုံးရှိရင်လုံလောက်ပါပြီ။
2. တော်တော်များများမှာတွေ့ရလေ့ရှိတယ်။ ခုမှစက်နင်းကစသင်မယ် ဖြစ်ချင်တာတွေ , လုပ်ချင်တာတွေ တချိန်တည်းမှာအရမ်းများနေတာပဲ ( သင်ယူနေတာတွေကို နေ့စဉ်ပြန်လေ့ကျင့် ကြိုးစားဖို့တော့လိုပါတယ် အရမ်းတော့ဆန္ဒမစောနဲ့အုံးနော် )
Read More>>> ပျိုမေလေးတွေ သိထားသင့်တဲ့ Meghan Markel ရဲ့ဖက်ရှင် လျှို့ဝှက်ချက် (၉) ခု
3. Beginner တွေ ကိုယ်တိုင်းနည်းစနစ်တကျ မကျွမ်းကျင်မှီ မိမိကိုယ်ကို ပြန်တိုင်းတာတွေမလုပ်နဲ့အုံးနော် ( အတန်းဖော်တယောက်ကိုတိုင်းခိုင်းပြီး ကိုယ်က သူတိုင်းတာကို ကြည့်ပြီး လိုအပ်ချက်ကို ပြောနော် )
4. ဒီလမ်းကြောင်းရွေးမိတာမှားပြီလားလို့ ဘယ်တော့မှ စိတ်ညစ်ပြီး လက်မလျော့ပါနဲ့နော်။ ( အဲ့လိုတွေးမိရင် လုပ်နေတာကိုခဏရပ်ပြီး အနားယူလိုက်ပါ။ တီဗီကြည့်၊ မုန့်ထွက်စား၊ သီချင်းနားထောင်၊ အပြင်သွားတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ) ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
5. တချို့လေးတွေက အဆင့်တွေကျော်ပြီး လေ့လာခြင်း လုပ်ကြတယ်။ အဲ့လိုမလုပ်နဲ့နော်။ မသင်ယူမီတည်းက စိတ်ညစ်ပြီး give up လုပ်မိမှာစိုးလို့ပါ။
6. ချုပ်ဖို့ပိတ်စရွေးတဲ့အခါမှာ ချုပ်မယ့်ဒီဇိုင်းနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ပိတ်စအသုံးပြုဖို့အရေးကြီးတယ်နော်။ ( မဟုတ်ရင် ပုံထွက်ပြောင်းသွားမယ် )
7. Beginner လေးတွေ ပိတ်စရွေးတဲ့အခါမှာ ချုပ်တာလက်မနိုင်မှီ ပိတ်စအပျော့တွေ၊ ပိတ်စအဆင် အရမ်းရှုပ်တာတွေရှောင်အုံးနော်။ ( အကျီ်က လက်မနိုင်သေးတော့ လက်ရာ မသပ်မရပ် ထွက်လာရင်လည်း စိတ်ညစ်စရာတွေ ဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ)
8. ပိတ်ညှပ်တဲ့အခါမှာ မျက်စိအမြင်လေးနဲ့ ပိတ်ကြောကိုမယူပါနဲ့နော်။ Grain line ကို pattern မှာဆွဲထားပြီး ပိတ်ညှပ်တဲ့အခါ သေချာ နေရာချနော်။
9. ကိုယ်က ဒီပညာရပ်ကိုစသင်ယူပြီဆို Sewing နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ( Terminology ) အခြေခံ ပညာရပ်အခေါ်အဝေါ်လေးတွေ လေ့လာထားနော်။
10. ချုပ်တဲ့အခါမှာ တဆင့်ချင်းဆီ စိတ်ရှည်ရှည်သင်ယူနော် ( ချက်ချင်းတော့ဘယ်မြန်မလဲ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပဲ ဆက်သွားပါ) ။ ချုပ်တဲ့အခါ ခဏခဏမှားချုပ်၊ ဖြုတ်ခြင်းက ဆက်သင်ယူဖို့ စိတ်ညစ်စေပြီး အချိန်ကြာစေပါတယ်။
11. ဒါလေးကတော့ ကိုယ်တိုင်ကသပ်သပ်ရပ်ရပ်တထည်ကောင်းကောင်းမချုပ်တတ်မှီ တခြားသူတွေကိုချုပ်ပေးဖို့ ဟန်ပြင်နေပီ။( မလုပ်နဲအုံးနော်) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အချိန်ပေးပြီး သေချာ အရင် သင်ယူအုံးနော်။
12. ဒါကတော့ ဘယ်ရမလဲ။ မချုပ်တတ်မီတည်းက ချုပ်တဲ့အခါ မြန်မြန်ပြီးအောင် အဆင့်ကျော်ချုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါဘီ။ ( step by step သွားနော် ကြာရင်ကြာပလေ့စေ ဒါမှချုပ်ပြီးရင် ချက်ချင်း ဝတ်လိုက်တာနဲ့ လှမှာရယ် )
13. ဒါလေးကတော့ တချို့သူလေးတွေက ဘာမှမချုပ်တတ်မှီ ပိတ်စတွေ, sewing accessories လျောက်ဝယ်ထားခြင်းပဲ အဲ့လိုမလုပ်နဲ့နော် ။ သင်တန်းတက်တော့မှ တီချယ်တွေက Beginner လေးတွေလိုအပ်တဲ့ အသုံးပြုရမယ့် ပိတ်စ, ပစ္စည်းတွေ, ဝယ်ရမှာတွေကိုလမ်းညွန်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့ ။ ကြိုဝယ်ယူတာတွေရှောင်နော်။ အပိုပိုက်ပိုက်ကုန်မှာဆိုးလို့။
14. သေချာဂရုတစိုက် ချုပ်နေရင်းနဲ့ မှားချုပ်မိတာတွေဖြစ်လည်း လက်ခံပေးနော်။ ( အမှားရှိမှ အမှန်သိမှာမို့ပါ )
15. ချုပ်တဲ့အခါမှာ ချုပ်ကြောင်းတွေ၂ခါ၊ ၃ခါလောက် ထပ်ကာထပ်ကာ ချုပ်တာတွေ မလုပ်နဲ့နော်။ ( ပိတ်စတွန့်တာ၊ တင်းတာ ဖြစ်ပြီး ချုပ်သားမလှမှာစိုးလို့ပါ ။ )
16. ချုပ်တဲ့အခါ ပိတ်ကြောကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်။ ( လည်ပင်းကွပ်တာမျိုးမှာ ပိတ်စောင်းသား bias မယူမိတာမျိုးပေါ့ )
17. Pattern ကို ပိတ်စနေရာချမမှားဖို့လည်းသတိထားအုံးနော်လို့။ ( ဥပမာ - ကတ္တီဘာအသား nap ကို အပေါ်, အောက် pattern လျောက်မထားနဲ့နော်။ )
18. ချုပ်တဲ့အခါ ချည်သေချာမတုပ်ခဲ့တာမျိုးပေါ့ ( unravel ) မဝတ်ရသေးဘူး ချည်ကပြုတ်နေပြီဆိုတာမျိုး ဖြစ်နိုင်လို့ပါ။
19 . ပိတ်ညှပ်တဲ့အခါ ကတ်ကြေးကို စက္ကူရော, ပိတ်ရော တစ်ခုတည်းနဲ့မညှပ်နဲ့နော်။ ( ကတ်ကြေးပျက်စီးတတ်ပြီး ပိတ်ညှပ်ရင်လည်း မသပ်ရပ်မှာစိုးလို့ပါ )
Source: Teacher - Yadanar Aung (New Look Fashion and Design School)